गर्मी मौसममा बालबालिकाको हेरचाह गर्ने ७ तरिका - inaruwaonline.com
गर्मी मौसममा बालबालिकाको हेरचाह गर्ने ७ तरिका
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०३, २०७४ समय: ०:२५:३०
जाडो सकिएर गर्मी मौसम सुरु भैसकेको छ । मौसम परिवर्तनसँगै यो बेला बच्चाहरुमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ । यस्तो मौसममा बच्चालाई घमौरा र घाउ-खटिरा आउने, धेरै पसिना आएर चिसो लाग्ने, बढी गर्मीले एलर्जी हुने जस्ता समस्या देखा पर्छ । त्यसैले गर्मीमा बालबालिकाको हेरचाह गर्दा निम्न कुरा ख्याल गर्नुपर्छ।
१.सहज पहिरन लगाइदिने
२. बेलाबेलामा डाइपर परिवर्तन गर्ने
गर्मी याममा पसिना आएर शरीरमा ब्याक्टेरिया पैदा गर्ने भएकोले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । खासगरी डाइपर निश्चित समयको अन्तरालमा बदल्ने गर्नुपर्छ । तीन घण्टाको अन्तरालमा बदल्नु उपयुक्त मानिन्छ । बच्चालाई डाइपर परिवर्तन गर्दा डाइपरले ढाक्ने भाग राम्ररी सफा गर्नुपर्छ । सुख्खा बनाएर मात्र नयाँ डाइपर लगाइदिनुपर्छ ।
३. झोल पदार्थ खुवाइरहने
४. तेलले मालिस नगर्ने
५. नियमित नुहाइदिने
गर्मीको मौसममा बच्चालाई नियमित रुपमा नुहाइदिनुपर्छ । साँझको समयमा चिसो स्पन्ज बाथ दिने र पछि क्रिम मसाज गर्ने गर्नुपर्छ।
६. कोठाको तापमान स्थिर राख्ने
७.चर्को घाममा बाहिर ननिकाल्ने
दिउँसोको कडा घाम बालबालिकाको लागि राम्रो हुँदैन । चर्को घामले बच्चाको कोमल छालामा सोझै असर गर्छ । त्यसैले चर्को घाममा बच्चालाई बाहिर निकाल्नु हुँदैन । बरु घाम डुबिसकेपछि साँझपख केही समयका लागि उनीहरुलाई बाहिर निकालेर डुलाउन सकिन्छ ।एजेन्सी